नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दशौं हजारको ज्यान लियो फिलिपिन्स मा अंधिबेहरी ले ! हेर्नुस भिडियो र समाचार
दशौं हजारको ज्यान लियो फिलिपिन्स मा अंधिबेहरी ले ! हेर्नुस भिडियो र समाचार
फिलिपिन्समा आएको विध्वँशक समुद्री आँधी पछि राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्विनोले देशव्यापी राष्ट्रिय विपदको घोषणा गरेका छन्। उनले आँधीबाट बाँच्न सफल मानिसहरुसम्म छिटो सहायता पुराउन र अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमा राख्‍न त्यस्तो घोषणा गरिएको बताए। मध्य फिलिपिन्समा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा
खराब समुद्री आँधीहरुमध्ये एकबाट बाँच्न सफल व्यक्तिहरुले आफ्ना ध्वस्त भएका घरहरुको पुनर्निर्माणको प्रयास गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। समुद्री आँधी हाइयानबाट ताक्लोबान नगरमा मात्रै हजारौं मानिसहरुको ज्यान गएको बताइएको छ। बीबीसीका एकजना संवाददाताले एउटै भवन पनि सद्दे नरहेको, भग्नावशेषहरु चारैतिर छरिएको र मृत गाइवस्तु तथा मानिसहरुको शवका कारण दुर्गन्ध फैलिएको बताए।